Hazo krismasy 14 amin'ny endrika PNG (mangarahara) | Famoronana an-tserasera
Efa akaiky ny krismasy ary azoko antoka fa maro aminareo no efa mitady loharano hamoronana ny Noelinao ary hiasa amin'ireo tetikasan'ity vanim-potoana ity. Tsy misy isalasalana, ny marika tsy azo ihodivirana sy iraisan'ireto daty ireto dia ireo hazo feno singa haingon-trano. Izany no antony itondrako kitapo mahaliana anao izao Maodely 14 amin'ny hazo krismasy.
Indraindray ny fanapahana ny hazo dia mety haharitra mandritra ny fotoana lava, ka anio dia mitondra rakitra vitsivitsy png endrika (izany hoe, miaraka amin'ny mangarahara) izay hamonjy fotoana betsaka anao. Ny sisa ataonao dia ny mampidina ireo sary ireo mivantana avy eto ary ny dingana manaraka dia ny manafatra azy ireo ao amin'ny Adobe Photoshop na ilay rindranasa ampiasainao hamoronana ny volanao. Ny fampiasana azonao omena azy ireo dia tena midadasika: Manomboka amin'ny karatra fiarahabana ka hatrany amin'ny famoronana fanesoana na fampidirana azy ireo ao amin'ny pejin-tranonkalanao. Nalaina tao amin'ny pejy ireo sary ireo Image Bank ary avy eo ampidiriko ny kaody HTML hahafahanao mampiditra azy ireo haingana ao amin'ny pejinao raha mila izany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Hazo krismasy 14 amin'ny endrika PNG (mangarahara)
Pablo Rojas dia hoy izy:
Hahaha, fantatrao tokoa
Valiny tamin'i Pablo Rojas